Qaraxii Muqdisho kadib, Mareykanka oo Waji kale ula soo baxaya Soomaaliya. – Xeernews24
Qaraxii Muqdisho kadib, Mareykanka oo Waji kale ula soo baxaya Soomaaliya.
17. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wargeyska “The Guardian” ee ka soo baxa London ayaa qoray Maqaal uu hal-ku-dheg uga dhigay: “Qaraxii Muqdisho kadib, Maraykanka oo laga yaabo inay kordhiyaan Kaalintooda Soomaalia”.
Madaxweyne Donald Trump waxa uu horey u ansixiyey Adeegsiga Ciiddanka Maraykanka ee ku sugan, ka hor inta aysan boqolaal qof ku geeriyoonin qaraxaii bilowgii isbuucan ka dhacay Muqdisho.
Sannooyin badan, Soomaalia waxay noqotay Aag la iloobay, iyadoo ay Caalamka ka socdaan Ololayaal kala duwan oo looga soo horjeedo Colaadaha Kooxaha Islaamiyiinta.
Wargeyska “The Guardian” waxa uu kaloo qoray in Qarixii ka dhacay Muqdisho laga yaabo inuu sare u qaado Kaalinta Firfircoon ee ay Maraykanka ku leeyihiin Soomaalia, waa sida uu Wargeysku qoray.
Bilowgii sannadkan, Madaxweyne Donald Trump waxa uu Soomaalia u aqoonsaday Deegaan ay dhaqdhaqqayo dagaal ka jiraan, taasi oo u fasaxaysa in Taliyayaasha la siiyop Awoodo dheeraad ah marka Hawlgalladda Duqeynta Cirka laga fulinayo gudaha Soomaalia.
Madaxweyne Trump waxa kale oo uu markii ugu horreysay meel mariyey in Ciiddamo Maraykan ah loo daad-gureeyo Soomaalia waana markii ugu horreysay ee Ciiddamo Maraykan loo soo diro Soomaalia tan iyo sannadkii 1994-kii.
Wargeyska “The Guardian” waxa kale oo uu wax ka qoray sababihii Milliteriga Maraykanka uga soo baxeen Soomalaia bilowgii sannadihii 1990-aadkii.
Milliteriga Maraykanka waxaa laga soo saaray Soomaalia, kadib, markii 2 Helikopter oo noocoodu ahaa |Black Hawk” loogu soo riday Muqdisho sannadkii 1993-kii, iyo maydadka Askarta Maraykan ee la sheegay in lagu jiid-jiiday Waddooyin ku yaalla Muqdisho.
Wargeyska waxa kale oo uu qoray in Askari ka tirsan Komaandooska Maraykanka lagu dilay Soomaalia bishii May ee sannadkan, kadib, markii ay Ciiddanka Maraykanka dagaal la galeen Alshabaab.
Wargeyska The Guardian waxa kale oo uu xusay in Kaalin kasta ee Doorka Maaryaknka ku yeelanayo ee Soomaalia ka hor imaan karto Asaaska hoose ee kordhinta Doorka Milliteriga Maraykanka ee guud ahaan Qaaradda Afrika.
Bilowgii bishan, 4 Askar Maraykan ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay gudaha dalka Nayjar.
Dhinaca kale, Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London waxa kale oo uu taxliil ku sameeyey Hawlgalka AMISOM ee La-dagaalanka Alshabaab.
Wargeyska waxa uu qoray in Somalia horey loogu daad-gureeyey in ka badan 20,000 oo Askar ka tirsan Hawlgalka AMISOM si ay ula dagaalamaan Alshabaab, balse si kulul loo naqdiyo Ciiddanka AMISOM.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/trump.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-17 22:08:552017-10-17 22:08:55Qaraxii Muqdisho kadib, Mareykanka oo Waji kale ula soo baxaya Soomaaliya.
Tababar Tababarayasha kubadda Gacanta Soomaaliya oo Ka Furmay Djibouti +Saw... Shaqsigii ka dambeeyay Weerarkii Zoobe oo la ogaaday & Halka uu bartilmaameedkiisu...